Global Voices teny Malagasy » Cándido Ríos, Mpanao Gazety Meksikana Nisy Namono : ‘Tsy Mitifitra Amin’ny Bala Ny Fitaovam-piadianay Fa Mitifitra Mahitsy’ · Global Voices teny Malagasy » Print
Cándido Ríos, Mpanao Gazety Meksikana Nisy Namono : ‘Tsy Mitifitra Amin'ny Bala Ny Fitaovam-piadianay Fa Mitifitra Mahitsy’
Voadika ny 31 Aogositra 2017 3:59 GMT 1	 · Mpanoratra J. Tadeo Nandika (en) i Miriam Kellerman, Liva Andriamanantena
Sokajy: Amerika Latina, Meksika, Ady & Fifandirana, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona
Cándido Ríos Vázquez. Sary nozaraina betsaka tao amin'ny Twitter.
Nisy namono tamin'ny 22 Aogositra 2017 ilay mpanao gazety Meksikana Cândido Ríos, fantatry ny mponina sy ny mpiara-miasa taminy ihany koa amin'ny anarana hoe “Pavuche,” tamin'ny fanafihana mitam-basy tao Hueyapan de Ocampo, Veracruz , any amin'ny morontsiraka atsinanan'i Meksika, araka ny loharanom-baovao ao an-toerana  .
Nanome ny antsipirihany bebe kokoa momba ny fahafatesany  ny sehatra famoaham-baovao mahaleo tena Animal Político :
Maty teny an-dalana raha nentina ho any amin'ny hopitaly i Ríos, fantatra amin'ny anarana hoe “Pavuche” teo anivon'ireo mpiara-miasa aminy, rehefa naratra vokatry ny tifitra basy kalibra avo lenta, araka ny voalazan'ny loharanom-baovao misahana ny raharaha tamin'ny AFP.
Nanampy ny lisitr'ireo mpanao gazety nisy namono tany Meksika tamin'ity taona ity ny anaran'i Ríos, anisan'izany i Salvador Adame , Miroslava Breach ary Javier Valdez . Mpanao gazety fahasivy nisy namono tamin'ny taona 2017 i Ríos araka ny mpisolovavan'ny fahalalaham-pitenena ao amin'ny Article 19.
Mpanorina ny gazety mpivoaka isan-kerinandro La Voz de Hueyapan i Ríos ary nanangom-baovao ho an'ny gazety Diario Acayucan  ao an-toerana nandritra ny 10 taona izy. Nahitana tatitra kolikoly sy ny polisy ny asany. Hoy ny nasongadin'ny  Animal Político :
Fantatra tamin'ny asa nataony ho mpanao gazety mitatitra ny heloka bevava ilay mpanao gazety sy noho ny fifandirana nifanaovany tamin'ny ben'ny tanàna teo aloha sasany tao amin'ny faritra noho ny asany.
Nizara sombin- dahatsary  iray nalain'i Rios tenany ilay mpisera Twitter Diana Gabriela, sivy andro monja talohan'ny namonoan'ny sasany azy, izay nahitana azy niampanga mafy ireo mpanao politika ao Hueyapan de Ocampo. Nanambara izy tao anatin'ilay lahatsary hoe: “Tsy mampiasa fitaovam-piadiana izahay. Mamono anay ry zareo amin'ny fahafantarana fa tsy mitifitra amin'ny bala ny fitaovam-piadianay fa mitifitra mahitsy (amin'ny marina).”
Ity ny fahatsiarovana an'i Cándido Ríos: ‘Tsy mitifitra amin'ny bala ny fitaovam-piadianay fa mitifitra mahitsy (amin'ny marina). ‘ Ilay mpanao gazety maty voatifitra tany Veracruz.
Mahagaga fa teo ambany fiarovan'ny manampahefana tao an-toerana i Ríos taorian'ny nahazoany fandrahonana ho faty noho ny asany fanaovan-gazety. Hoy ny tatitry ny Gazety La Jornada :
Nitatitra i Jorge Morales, avy ao amin'ny Vaomieram-panjakana Manohana sy Miaro ny Mpanao Gazety, fa nametraka fitoriana ny sasantsasany amin'ireo mpanao politika ao amin'ny faritra i Cándido Ríos noho ny herisetra natao taminy .
Nanazava ny tranokalam-baovao Huffington Post hoe :
Nahatonga azy ho nalaza teo anivon'ny mpamaky ny ezaka nataony tsy misy fitsaharana mba hanamelohana ny tsy rariny, sy hahazo fahavalo tahaka ny ben'ny tanàna teo aloha tao Hueyapan fonenan'i Ríos ihany koa, izay nandrahona azy ho faty imbetsaka, hoy ny mpiara-miasa taminy teo aloha Cecilio Perez, talen'ny Diario de Acayucan.
Mandritra izany, nizara ny sariny tao amin'ny Twitter ny vavahadim-baovao MX Politico :
Cándido Ríos, el periodista asesinado en #Veracruz , advirtió que lo iban a matar https://t.co/Hzk4SRwKdt pic.twitter.com/CHwBTFf2Mc 
Nampilaza ny rehetra i Cándido Ríos, ilay mpanao gazety novonoina tany Veracruz fa hisy hamono izy
Nanome tati-baovao ny kely indrindra tamin'ny famonoana an'i Ríos ny sehatra famoaham-baovao mahazatra ao amin'ny firenena. Samy namoaka araka ny fomba filazany mikasika ny antony ambadiky ny famonoana azy ny sasany tamin'izany. Nanasongadina fanehoan-kevitra  avy amin'ny manampahefana iray ao amin'ny governemanta Meksikana ny vaovao nasionaly antserasera Milenio izay nilaza fa tsy i Ríos no lasibatra tao anatin'ny fanafihana izay nahafatesany :
Tsy ilay mpanao gazety Cándido Ríos Vázquez no lasibatra tamin'ny fanafihana izay nahatonga azy sy ny olona roa hafa ho faty teo amin'ny tobin-tsolika iray tao Hueyapan de Ocampo, Veracruz, hoy i Roberto Campa Cifrian, sekretera lefitra ao amin'ny Sekretarian'ny Zon'olombelona ao amin'ny Minisiteran'ny Atitany.
Nizara izao hafatra manaraka izao tamin'ireo mpanjohy azy i Jaqueline Dorantes:
Cándido Ríos no hany mpanao gazety tao Hueyapan
Nanjary lasa toerana tena mampatahotra i Meksika ho an'ny asan'ireo mpanao gazety, izay matetika mahazo fandrahonana sy herisetra amin'ny fanaovana ny asany. Araho ny tatitra ataonay manokana  momba ireo heloka marobe amelezana ny asa fanaovan-gazety ao Meksika, sy ny tsifanasaziana manodidina ny raharaha.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/08/31/106484/
 Hueyapan de Ocampo, Veracruz: https://en.wikipedia.org/wiki/Hueyapan_de_Ocampo
 araka ny loharanom-baovao ao an-toerana: http://imagendelgolfo.mx/noticiasveracruz/policiaca/41202993/ejecutan-a-3-hombres-en-el-sur-de-veracruz-entre-ellos-a-exmando-de-acayucan-y-un-periodista.html
 Nanome ny antsipirihany bebe kokoa momba ny fahafatesany: http://www.animalpolitico.com/2017/08/periodista-veracruz-candido-rios/
 Salvador Adame: https://globalvoices.org/2017/06/27/salvador-adame-is-the-seventh-journalist-murdered-in-mexico-in-2017/
 Miroslava Breach : https://globalvoices.org/2017/03/26/reporters-murder-in-mexico-revives-outrage-over-violence-against-journalists/
 Javier Valdez: https://globalvoices.org/2017/05/21/no-to-silence-javier-valdezs-murder-highlights-persistent-perils-for-mexican-journalists/
 Diario Acayucan: http://www.diarioacayucan.com/
 sombin- dahatsary: https://www.youtube.com/watch?v=4CRhDOkVt-w
 August 23, 2017: https://twitter.com/diana_gabb/status/900441287882682368
 tatitry : http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/08/22/asesinan-a-periodista-en-veracruz-es-el-noveno-en-lo-que-va-del-ano
 Nanazava : http://www.huffingtonpost.es/2017/08/23/candido-rios-el-decimo-periodista-asesinado-en-mexico-en-lo-que-va-de-ano_a_23158174/
 August 23, 2017: https://twitter.com/MXPolitico1/status/900479260925845504
 August 23, 2017: https://twitter.com/JaquelineDrnt/status/900477999912452101
 tatitra ataonay manokana: https://globalvoices.org/specialcoverage/mexican-journalists-say-no-to-silence/